October 21, 2021 sonsonlinlin 0
လူသားတိုင်းက သူတို့ချစ်တဲ့သူနှင့်သာ အတူနေထိုင်လိုပြီး တစ်သက်လုံးစာအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတွက် အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်၍ တကယ်တမ်း ခွဲခွာကြရသည့်အခါ နာကျင်မှုတွေနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းငိုကြွေးကြရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ချစ်သူစုံတွဲနှစ်ဦးသည် တစ်ရပ်ကွက်ထဲအတူနေပြီး ငယ်လေးကတည်းကကျောင်းတူတူတက်ခဲ့ကြပြီး အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့် ကောင်လေးမှ သူ့ခံစားချက်အစစ်အမှန်အား ဖွင့်ပြောခဲ့၍ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ခဲ့ကြပြီး အချိန်ကြာတွဲလာခဲ့ရာကနေ ကောင်လေးမှချမ်းသာသူမဟုတ်သည့်အတွက် ချစ်သူမိန်းကလေးမှလိုချင်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်သည့်အခါ အခြားသူများနှင့်ယှဥ်ပြီး စကားများရန်ဖြစ်လာကြတော့သည်။ ထို့အတူ မိန်းကလေးဧ။်မိသားစုမှလည်း ထိုကောင်လေးအား ပိုက်ဆံမရှိ၍ သူတို့သမီးလေးကို တင့်တောင့်တင့်တယ်မထားနိုင်မှာကို တွေးမိကာ သဘောမကျခဲ့ပေ။ […]
၀က်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ်နဲ့ အဆီဖုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရရင် Hello မလှချင်တို့ရေ ဒီကမလှချင်နဲ့ အတူတူ လိုက်လုပ်ရအောင် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ပီးရင် အတူတူလှကြတာပေါ့ It’s skin care time ဒီတစ်ပတ်တော့ အမေးများနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့တင်းတိပ်တွေ ထွက်နေတယ် ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ရှိနေတယ် အဆီဖုတွေ ဖြစ်နေတယ်အမဲစက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေ ရတယ် ဘာလုပ်ရမလဲအကြံဉာဏ်ပေးပါဦး တင်ပေးပါဦး ဆိုသူတွေအတွက်လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အကုန် အကျသက်သာတဲ့ သဘာဝအိမ်တွင်းနီးလေးကို […]
မွေးနေ့ ပိုင်ရှင်လေးများ အကြောင်း တနင်္ဂေနြ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1 ရုပ်တည်ကြီးနေ တတ်ပေမယ့်..တကယ်ခင်သွားရင်လဲသူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲမှ ာမျက်နှာအပြောင်ဆုံးကသူပဲ..အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ်…ရတာမလိုလို တာမရတွေလေ….. အစွဲလန်းလဲကြီး တယ်ချစ်ပြီဆို တခြားလူနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူးအချောကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းရှိတယ်ညို့အား အပြင်းဆုံးက အသံ (အသံလေးကြား ဖူးရုံနဲ့တင် စွဲလန်းသွားစေ တာမျိုး) တနင်္လာ အထာကျတဲ့ နေရာမှာ No. 1တခုခုဆို အရမ်းပြတ်သား တယ်ပြောစရာရှိရင် ဘယ့်သူ့ကိုမှာ […]
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုး (၇)ခု ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီဆို တဲ့ စကားလေး အတိုင်း ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီး တဲ့ သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် ကိုယ်အား ကိုးနိုင်တယ်။ဆိုးချင် သလိုဆိုးနိုင်မယ်။ ချွဲလို့ရ တယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က သူ့ကိုဆရာ တောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနဲ့ကလေး စုံတွဲတိုင်းတော့ ဒီလိုဖြစ်ချင် မှဖြစ်မှာပါ ။သေချာတာကတော့ ဦးအရွယ်တွေ က ကိုယ့်ထက်ဗဟုသုတများ မယ်။ […]
အိမ္ေဆာက္ရင္ သိထားရမယ့္ လူေသတဲ့အထိ ဒုကၡေပးတဲ့ သစ္ဆက္နည္းအေၾကာင္း
အိမ်ဆောက်ရင် သိထားရမယ့် လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ သစ်ဆက်နည်းအကြောင်း အိမ် တအိမ်မှာ စီးပွားပျက်ပြီး လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ ပင်လယ်ကူးသစ် လို့ခေါ်တဲ့ အကြောင်း အဲ့ဒါ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ပင်လယ်ကူးလို့ခေါ်တယ်… အ လွန် ခိုက်ပါတယ်.. အိုက်အိမ်မှာ နေသူများ စီးပွားမဖြစ်တတ်ဘူး။ လူသေသည် အထိအောင် ဒုက္ခ ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သစ် ကို ဆက်တဲ့နေရာဟာ တိုင်ရှိရင် ဆက်လို့ ရပါတယ်။ တိုင်မရှိပဲ ဆက်ထားရင်တော့ […]
ခေါင်းဖြီးလိုက်လို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်မညစ်ရအောင် ခေါင်းဖြီးလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်ညစ်ရသလို၊ ဆိုင်မှာခေါင်းသွားလျှော်ရင်လ ဲအစ်မဆံပင်တေ ွကျွတ်တယ်နော် ပြောရင် စိတ်ပိုညစ်ရပါတယ်။ အမှတ်မထင်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ဆေးနည်းလေးနဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ ကိုယ့်လိုစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ ဆေးဘက်ဝင်တာသိပေမဲ့ ကြက်သွန်နီကိုကြိတ်ပြီး ခေါင်းပေါ်လိမ်းတဲ့အခါ ကြက်သွန်စိမ်းနံ့ပျောက်ဖို့ိ တော်တော်ခေါင်းလျှော်ယူရတာ ကျွန်မအတွက် ်သိပ်အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ တော်တော်အဆင် ပြေပါတယ်။ လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ဆန်ကိုပန်ကန်လုံးလေးနဲ့တစ်ခွက်ယူပါ။ ဆန်ကိုထမင်းချက်သလိုပဲ နှစ်ကြိမ်လောက်ဖွဖွလေးဆေးပါ. ဆေးထားတဲ့ဆန်ကို နှစ်နာရီလောက်စိမ်ထားလိုက်ပါ […]
နေကြာက အနေကြာစေမည့် ယတြာတဲ့လား
“စစ်ကောင်စီက အနေကြာအောင် နေကြာပန်းဝတ်စုံများဖြင့် ယတြာချေသလား” ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၀ရက် သီတင်း ကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား တန်ခိုးကြီးဘုရားများသို့ ဘရားဖူးများစည်ကားသိုက် မြိုက်စွာသွားလာနေကြသည့် ဓာတ်ပုံများ လူမှုကွန်ယက်တွင်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဘုရား သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြသူများ တွင် စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူအမျိုးသမီးအများအပြားပါဝင်နေပြီး အဆိုပါ အမျိုးသမီးများမှာ နေ ကြာပန်းပုံပါသည့် ဝတ်စုံများ အရောင်အသွေး စုံလင်စွာဝတ်ဆင်နေမှုများကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် တွေ့ရှိရသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ရှိ ဝါဒဖြန့် မီဒီယာများဖြစ်သည့် […]